महिलाले सन्तसँग भनिन्–मेरो रिसका कारण सबैजना मबाट टाढा भए रिसमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने? « The News Nepal
महिलाले सन्तसँग भनिन्–मेरो रिसका कारण सबैजना मबाट टाढा भए रिसमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने?
एक प्रचलित लोककथाका अनुसार प्राचीन समयमा शान्ति नाम गरेकी एक महिला थिइन्। उनी निकै रिसालु स्वाभावकी थिइन्। रिस उठेपछि उनी सानो ठूलो केही चीज पनि देख्दैन थिइन्। र जे मुखमा आयो, त्यही बोल्थिन्। उनको रिसका कारण परिवार र गाउँकै मानिसहरु पनि दुखी थिए।
रिसमाथि नियन्त्रण हुन नसक्दा महिलालाई धेरै पश्चाताप हुन्थ्यो। एक दिन उनी गाउँका एक जना सन्तकहाँ गइन्। शान्तिले सन्तसँग आफ्नो रिसाउने बानीबाट छुटकारा दिन अनुरोध गरिन्। आफूले रिसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै कोशिश गरेको तर सफल नभएको सुनाइन्।
उनले सन्तलाई यस्तो कुनै उपाय बताउन भनिन्, जसबाट रिसलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस्। सन्तले शान्तिलाई एउटा सिसी दिँदै भने–यो सिसीको औषधि सेवन गर्दा तिम्रो रिस नियन्त्रण हुन्छ। जब तिमीलाई रिस उठ्छ, तब यो सिसी खोलेर पिउनु, त्यतिबेला सम्म पिउनु जतिबेलासम्म तिम्रो रिस शान्त हुँदैन। एक हप्तामा तिम्रो रिसमाथि नियन्त्रण हुन्छ।’
शान्तिले आफूलाई रिस उठेपछि त्यो औषधि पिउन सुरु गरिन्। एक हप्तामा उनको रिस कम हुन थाल्यो। उनी खुशी भएर सन्तकहाँ फेरि गइन्। उनले सन्तलाई भनिन्–गुरुजी तपाइँको औषधिले चामत्कारिक रुपमा मेरो रिसलाई कम गरिदियो। कृपया यो औषधिको नाम बताइदिनुस्।’
सन्तले शान्तिसँग भने–यो सिसीमा कनै औषधि थिएन। सामान्य पानी थियो। रिस उठेको समयमा तिम्रो बोली बन्द गर्नुपर्ने थियो। तिमीलाई मौन राख्नु थियो। त्यसकारण मैले तिमीलाई सिसी दिएको थिएँ।
सिसी मुखमा राखिरहेका कारण रिस उठेका बेला तिमी बोल्न सकिनौं, त्यसकारण मानिसलाई तिमीले कटु वचन गर्न सकिनौं। तिमी चुप लागेर बसेपछि अर्को पक्षले पनि तिमीलाई जवाफ दिएन। हामी जब कसैलाई क्रोधको जवाफ मौनबाट दिने हो भने कुरा त्यँही सकिन्छ।’
यो कथाबाट के शिक्षा मिल्छ भने रिसलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय मौन हो। रिस उठ्दा हामी मौन बस्ने हो भने कटु बचन बोल्नबाट बचिन्छ। रिसलाई नियन्त्रण गर्न दैनिक विहान केही समय ध्यान गर्नुपर्छ।